ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း…. - Tameelay
ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း ….
လာဘ္မစားဖို႔ ေအာက္ဆိုဒ္မရွာၾကဖို႔ အစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္သစ္ ..
– ဌာနမွအႀကီးအကဲႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံစာ
– ေငြေခ်းမည့္ကာယကံရွင္၏ ဝန္ထမ္းကတ္မူရင္း
– ေငြေခ်းမည့္ကာယကံရွင္၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္
– ေငြေခ်းမည့္ကာယကံရွင္၏ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ
– ေငြေခ်းမည့္ကာယကံရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း
– ေငြေခ်းသူကို အာမခံေပးမည့္သူ ႏွစ္ဦး၊ အာမခံေပးမည့္သူႏွစ္ဦး၏ ဝန္ထမ္းကတ္
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက် သတင်းကောင်း ….
လာဘ်မစားဖို့ အောက်ဆိုဒ်မရှာကြဖို့ အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်သစ် ..
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို လစာ၏ ငါးဆနှုန်း စက်တင်ဘာတွင် စချေးမည်
အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (SMID Bank) က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ လစာ၏ ငါးဆနှုန်းဖြင့် ထပ်မံထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း SMID Bank ထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်၍ SMID Bank က လစာ၏သုံးဆနှုန်းကို ထုတ်ချေးပေးခဲ့ရာ လက်ရှိအချိန်အထိ ပျက်ကွက်မှုမရှိဘဲ အောင်မြင်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ချေးငွေသက်တမ်းပြည့်သည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် သက်တမ်းပြည့်ရန်လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အရင်းအတိုး အကျေဆပ်ပြီးပါက စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် လစာ၏ငါးဆကို ထပ်မံထုတ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဘဏ်ထံမှသိရသည်။
ချေးငွေ ပုံမှန်ပြန်လည်မဆပ်နိုင်ပါက ဘဏ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ အကျေပြန်လည်မဆပ်နိုင်ပါက လစာငါးဆ ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည်မဟုတ်ကြောင်း SMID Bank အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇေယျာညွန့်က ပြောကြားသည်။
“အပြင်တွေမှာချေးရင် တစ်ဆယ်တိုးလေ။ ဒီချေးငွေက သုံးဆလည်း ရတယ်။ တစ်ကျပ်တိုးဆိုတော့ အတိုးလည်းနည်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ ဘဏ်သွားတဲ့သုံးခေါက်မှာ ဖောင်ကိုဝယ်လို့ မရဘူး။ ရန်ကုန်မှာက ဝန်ထမ်းလည်းများတော့ လူလည်းတအားများတယ်”ဟု ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်မှ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်သဇင်က ပြောဆိုသည်။
ချေးငွေများကို တစ်လလျှင် အတိုးနှုန်း ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း လစဉ်အရစ်ကျ အကျေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ကာ ှSMID ဘဏ်များက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လမှစတင်၍ လက်ရှိကာလအထိ အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ကျပ်ဘီလီယံ ၆၀ အထိ ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း SMID Bank ထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်မတို့က လစဉ်လည်း မှန်မှန်ပြန်ဆပ်ပါတယ်။ ဒီမေလကုန်မှာ ကျေမှာပါ။ ဒီတစ်ခါ ငါးဆထပ်ချေးပေးမှာဆိုတော့ ဝမ်းသာစရာပေါ့”ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးသင်းက ဆိုသည်။
ချေးငွေချေးပေးသည့် အချိန်ကာလကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ယင်းချေးငွေအကြောင်း အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက SMID Bank ရုံးချုပ် ဝ၁-၂၃၀ ၂၃၈၅၊ ဝ၁-၂၃၀ ၂၃၉၁ တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ယင်းဘဏ်ထံမှသိရသည်။
– ဌာနမှအကြီးအကဲနှစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ
– ငွေချေးမည့်ကာယကံရှင်၏ ဝန်ထမ်းကတ်မူရင်း
– ငွေချေးမည့်ကာယကံရှင်၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်
– ငွေချေးမည့်ကာယကံရှင်၏ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
– ငွေချေးမည့်ကာယကံရှင်၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း
– ငွေချေးသူကို အာမခံပေးမည့်သူ နှစ်ဦး၊ အာမခံပေးမည့်သူနှစ်ဦး၏ ဝန်ထမ်းကတ်
ညအိပ္မေပ်ာ္သူေတြအတြက္ ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း (၅) ခု
ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲျခင္းနဲ႔ အိပ္ေရးမဝျခင္းေတြဟာ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးေတြကို အလြန္ဒုကၡေပးတဲ့ အရာေတြပါ။ ေကာင္းစြာအိပ္စက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းေတာ့ျခင္းနဲ႔ လိင္မႈေရးရာ ဘဝကိုပါ ထိခိုက္လာေစတတ္ပါတယ္။ အိပ္ယာထဲဝင္လိုက္တာနဲ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ အိပ္ေပ်ာ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း ၅ ခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အိပ္ယာဝင္ …
မိတိၲလာမွာ စာေမးပြဲသြားေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသူသူႏွစ္ဦးရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ရပ္
မိတိၲလာမွာ စာေမးပြဲသြားေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသူသူႏွစ္ဦးရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ရပ္ မိတိၲလာမွာ စာေမးပြဲသြားေျဖတဲ့ ကြန္ဒီ(၁)က တကက/စရ အမ်ိဳးသမီးဆုိင္ကယ္စီးသူႏွစ္ဦးစလုံးေသဆုံး ၂.၁၂.၂၀၁၇.မိတၱီလာတကၠသုိလ္အေဝးသင္စာေမးပြဲလာေျဖႀကသည့္ေက်ာင္းသူမ်ား၊စာေမးပြဲၿပီး.ပုဂံဘုရားဖူးသြားႀက … အျပန္လမ္းမွာေရေဝးနဲ႔ဇရပ္ကုန္းႀကား ဆုိင္ကယ္အရွိန္လြန္ၿပီးလဲက်… ေနာက္ကအရွိန္လြန္လာတဲ့ Express ကားဝင္တုိက္မိၿပီး တစ္ေယာက္ေနရာတင္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေဆးရုံမေရာက္ခင္ေသဆုံးသြားႀကပါေလသည္။… ဝမ္းတြင္ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာက ဒုတိယႏွစ္ စီးပြားေရးေက်ာင္းသူရယ္ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္ အနီးက တတိယႏွစ္ …